Friday,3Aug, 2018 12:59 AM
‘मान्छेको माया यहाँ खोलाको पानीजस्तो...’ उतिबेला किशोरावस्थामा स्वरसम्राट् नारायण गोपालको यो गीत खुबै सुन्थें । पहिले गीतका शब्दले मुटु हल्लिने गरी हिर्काउँथ्यो । अहिले गीत सुन्नेबित्तिकै मथिंगल हल्लिने गर्छ । साँच्चिकै मान्छेको मन, माया र प्रेम भन्ने कुरा खोलामा बग्ने पानीजस्तै हुँदोरहेछ । भएभरको सबै वस्तु मिसिने खोलाको पानी कति कञ्चन छ भनेर कसले छुट्ट्याउन सक्नु ? त्यस्तै कसको मनमा कस्ता खालका भावना उनिएका छन् बुझ्नै कठिन ! ऊ मेरो जीवनमा त्यही अनौठो बनेर आयो । ऊभित्र के–कस्ता भावना जाग्छन् म त्यो नाप्न सक्दिनँ । उसका हाउभाउ मात्रै बुझ्छु । २३ वर्षे लक्का जोवन ! खाइलाग्दो ज्यान । शरीरको बनावट असाध्यै मिलेको । गोरोमा गोरो त्यसमाथि रेबनको चस्मा लगाउँदा कुनचाहिँ युवती नपट्टिएलान् र ? सुन्दरताको तारिफ गरिसाध्य छैन । लाग्छ, भगवान्ले उसलाई प्रकृतिमा रोजेरै पठाएका हुन् । सबै साथीभाइसँग उत्तिकै मिल्ने स्वभावका उनी तिनै मेरा मित्र हुन्, योगेन । मभन्दा पढाइमा तेजिलो । एकपटक भनेको कुरा दिमागले टिपेपछि डिलिट नहुने । भविष्यमा गायक बन्ने सपना छ । अहिले संगीत सिक्दैछ । स्वर त्यस्तो जादुमय नभए पनि मिठास छ । गितारको तालमा ओठ चलाउँछ र भावनामा डुब्दै गीत गाउन थाल्छ ‘पर्खि बसें आउँला भनी... ।’